November | 2009 | Save Burma
World focus on Burma (30.11.2009)
The Epoch Times – Ray M. Wong – ‎
She is currently imprisoned in Burma (now officially called Myanmar) byaruthless military regime and deserves to be freed. …
GENEVA, SWITZERLAND — The next timeacyclone hits MyanmarBurma), the population in 50 villages will know what to do. …
Annual Reminder: Some Journalism Deserves Respect!
New Yorker – George Packer – ‎
… an editor of the Myanmar Nation weekly in Rangoon, who was arrested shortly before I was to meet him onatrip to Burma last year, and who is servinga…
Indonesian democracyahuge work in progress: Marty
The Nation – ‎
How would describe Asean’s efforts on Burma so far? Asean has been less than successful on Myanmar, as have others. The international focus on Myanmar has …
Indonesia in parleys with Burma for detained fishermen
“Embassy personnel made representations with Myanmar [Burmese] authorities for the return of the Filipino fishermen’s passports and other belongings,” the …
We [IPCNKR] would like to take this opportunity to issueaheartfelt appeal for the restoration of human rights in Myanmar,” he noted. …
Burma should democratize on its own
Business Mirror – Estrella Torres – ‎
He said the situation in Burma (renamed Myanmar by the military junta) is now ona“critical stage” because the role of the international community is fast …
South Asian Women’s Day observed in Delhi
Gaea Times –
The event also saw films being screened on the life and work of rights activists like Aung San Suu Kyi of Myanmar. November 26th, 2009 NEW DELHI – The Delhi …
Veteran Politicians Urge Reconciliation
The Irrawaddy News Magazine – Arkar Moe –
The letter said: “It is obvious that Burma is one of the least developed countries and the country deteriorated in all areas.” Similiar letters were sent to …
Myanmar (Burma): Greater funding needed to meet most critical needs
Reuters and alertnet are not responsible for the content of this article or for any external internet sites. The views expressed are the author’s alone. …
IPS – Marwaan Macan-Markar – ‎
The former chief economist of the World Bank will fly into Burma, or Myanmar as it is also known, on Dec. 14 foramission aimed to examine and improve the …
What Is Critical for Growth?
Korea Times – Henrique Schneider – ‎
Unfortunately, the lowest 10 percent, ie the most corrupt countries, have infamous members in Asia, like Laos, Myanmar (Burma) and North Korea. …
… the Korean Peninsula and the Iranian nuclear issue, the situation in Burma/Myanmar and Sri Lanka, as well as developments in Afghanistan and Pakistan. …
Asian Tribune – Stephen Long – ‎
How many years has the eloquent, dissident voice of Daw Aung San Suu Kyi been silenced? Also examine closely the biography of Gen. …
No Military Reshuffle after Top Brass Meet
They last held an election in 1990 but refused to hand the country over to the National League for Democracy led by Aung San Suu Kyi, which wonalandslide …
Netherlands – Verhagen speaks with Thant Myint-U about Burma
… expressed concern about the lack of democratisation in Burma, the oppressive
World focus on Burma (29.11.2009)
Than Shwe urges USDA to forge ahead
… according to the state-own New Light of Myanmar newspaper on Saturday. Burma’s military rulers claim that they are the saviors of the Union, …
South, Southeast Asian mps unite on Burma
… Myanmar Caucus (AIPMC), said, asean’s approach towards Burma has failed to bring any changes and that it requiresacoordinated effort. …
A tour of Burma from Mandalay to Bagan revealsacountry of harsh contrasts
Daily Mail – Mark Palmer – ‎
We might not have seen the atrocities the regime keeps hidden but, equally, no one can say that we came to Burma (which changed its name to Myanmar on …
ASIA: Artists Join Forces to MakeaDifference in Mekong
Inter Press Service – Chris Mony – ‎
…aparticipant from Burma. “I think we need to change the performing arts in Myanmar. We cannot simply stick to the old traditional style. …
The only government that has made significant use of the weapon is Myanmar, Burma, the outcast regime there. We have seen production falling off to onlya..
Asian Lawmakers Want Regional Powers To End Sufferings In Myanmar
Bernama – ‎
“Things are getting worse in Burma (Myanmar) instead, there are more refugees fleeing Burma,” said Charles Chong,aSingapore parliamentarian and vice-chair …
… flourishing democracy” has only been verbal assurances as part of its “roadmap” towards political reform in Burma, officially called Myanmar. …
South, Southeast Asian MPs joined hands for Burma
Lankaweb – Nava Thakuria – ‎
The group consisting parliamentarians from India, Nepal, Singapore, England, Burma (Myanmar) and Tibet, was also unanimous that all political prisoners must …
Burma trip will be an eye-opener
Orillia Packet & Times – ‎
In Burma, officially known as Myanmar by its dictatorship, she learned that “government is always good.” She remembers marching to public rallies with her …
Finding love in the face of brutality
Welland Tribune – George Duma – ‎
The Myanmar/ Burma government reluctantly agreed but it was nonsense. “Many of those monks disappeared and to this day, nobody knows where they are,” …
Greensboro News & Record – Lorraine Ahearn – ‎
Win, who speaks no English, spent 20 years inaThai refugee camp after escaping from Myanmar, formerly known as Burma. He left family behind to come to the …
Weekly Business Roundup (November 28, 2009)
The regime-linked Myanmar Rice and Paddy Association claimed earlier this month that Burma’s rice exports could reach one million tons for the 2009-2010 …
Burma Media Faces Junta Squeeze
Asian Tribune – Zin Linn – ‎
Staff members of the Voice, the Foreign News, the Favourite, the Pyi Myanmar and the Kandarawaddy journals are reportedly picked up foralife in jail. …
The Weekly Standard – Elliott Abrams – ‎
On his Asia trip the president consorted, at the ASEAN meeting, with the prime minister of the repressive regime in Burma, General Thein Sein, …
Opinion: Burma’s minorities must not be overlooked
GlobalPost – Richard Sollom – ‎
… and 80 percent of the seats in the People’s Assembly. SLORC dismissed the results, and subsequently detained NLD’s Prime Minister-elect Aung San Suu Kyi.
နိုင်ငံရေး သဘောထား (ဦးအေးသာအောင်)
Tagged with ဦးအေးသာအောင်
World focus on Burma (28-11-2009)
In UNICEF, Critique of Veneman Is Only Half Answered, Second Term Questioned
Inner City Press – Matthew Russell Lee –
… the huge Israeli attack and massive damage and destruction, in MyanmarBurma during Cyclone Nargis, in China during the massive earthquake, etc. …
Activism and Diplomacy Yield Progress in Myanmar/Burma
OpEdNews – arn specter –
During the last few months much progress has been made in Myanmar/Burma in opening up talks with the military junta by the United States, European Union and …
Welland Tribune – George Duma –
The Myanmar/Burma government reluctantly agreed but it was nonsense. “Many of those monks disappeared and to this day, nobody knows where they are,” …
Burma Media Faces Junta Sqeeze
Asian Tribune – Zin Linn –
Signs emerge for progress in Myanmar: EU envoy
Myanmar has been ruled by the military since 1962, when the country was known as Burma. A UN commission issuedaresolution this month expressing “grave …
Burmese video-journalists risk their lives to reveal the truth
The Nation – Khin Maung –
“T”, along with his colleague “Z”, shot video images that were made into “Orphans of Burma’s Cyclone”,adocumentary film that won the prestigious Rory Peck …
Singapore Company Wins Contract for Burma Gas Deal
Swiber Holdings Limited announced inastatement Friday that an undisclosed Burmese oil company has agreed to pay the firm $77 million to lay 150 kilometers …
Handcuffing of Burmese-American in court protested
According to the veteran lawyer, who earlier this year co-defended detained pro-democracy leader Aung San Suu Kyi, Burma’s law does not permit an accused to …
So will they meet?
Gaea Times – ‎9 hours ago‎
By Smita Prakash (ANI) October 9th, 2009 LONDON – Detained BurmeseAung San Suu Kyi will meet Western diplomats to discuss sanctions … pro-democracy leader
Birmania. Aprite gli occhi
Blogosfere (Blog) – ‎
… opaque talks of Aung San Suu Kyi’s release—should make pundits weary of the a-historical and deliberately naïve pro-election discourses. …
World focus on Burma (27-11-2009)
Lonely Planet’s Myanmar (Burma) guidebook isagood companion for independent travellers and clearly indicates who owns what. …
Inbound Tourism Booms: Official
The Irrawaddy News Magazine – Wai Moe –
Speaking to The Irrawaddy on Friday, an official with Myanmar [Burma] Travels and Tours of the Ministry of Hotels and Tourism said numbers of …
PR Newswire (press release) – ‎
EU-China Summit to focus on efforts in striving for ambitious deal on climate …
Európai bizottság –
… crisis as well as the bilateral relationship and international issues, like non-proliferation, Iran, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka and Burma/Myanmar. …
‘Burma’s Political Instability Could Increase Drug Threat’-Report
The Irrawaddy News Magazine – Lawi Weng –
The report, released in Bangkok on Thursday, says: “The political situation in Myanmar in 2009 is unsettled, with open hostilities between government and …
Emily Shine: Activist teaches the power of persistence
Post-Bulletin – ‎
Her father, Aung San, steered Burma away from British rule and to independence in 1947. He was assassinated by his rivals that same year. …
Increased drug threat due to instability in Burma: report
With ongoing hostilities between the government and ethnic armed groups, who hadaceasefire agreement, the political situation in Myanmar in 2009 is …
Burmese cultural troupe to perform in northeast India
Mizzima.com – Mithu Choudhury – ‎
Guwahati, Assam (Mizzima) – A 15-member cultural troupe from Burma is to arrive in India’s North-eastern region on Saturday to showcase …
Junta puts Kokang Companies on Blacklist
The state-run press in Burma has made no mention of the move to date. Saeng Juen, an editor for the Thailand-based Shan Herald Agency for News, said, …
South Asia’s Berlin Wall
Al-Arabiya (press release) (subscription) – ‎
From Afghanistan in the west to Burma (Myanmar) in the east, you could travel from one end of the subcontinent to the other, that is, until the British left …
Putting Things All Together: Art class uses weaving lessons to point students …
Winston-Salem Journal – Kim Underwood – ‎
A substantial number of Allred’s students come from Karenni (sometimes spelled Kareni),astate in the eastern part of Burma, or Myanmar. …
The Dish: Khao Soi
Wall Street Journal – Robyn Eckhardt –
Khao soi’s antecedent is thought to beanoodle dish that made its way to Chiang Mai from Burma, now known as Myanmar, with the Chin Ho (also spelled Chin …
Burmese pro-democracy activists brief Indian intellectuals
Speaking at the seminar, titled “The Paranoia of Unpredictability: Is democracy possible in Burma/Myanmar?” held in Jamia Millia Islamia University, …
Philippine Diplomats Seek Repatriation of 14 Fishermen Detained in Burma
The military prison, where Burma’s opposition leader, Aung San Suu Kyi, was recently jailed, is notorious for its harsh conditions. …
ReliefWeb (press release) – Francis Wade –
… of Myanmar reported the seizure of 154000 methamphetamine pills, drug-making equipment and weaponry inasmall village in the Kokang region of Burma’s …
:. Can Islamic World be Saved?
Kashmir Watch – Abdul Ruff –
President Obama has rightly asked Burma to free Burmese pro-democracy leader Aung San Suu Kyi, but he should also extent the logic to Afghans, …
RP seeks release of fishermen in Myanmar
YANGON (AP) – The Philippines Embassy is seeking the release of 14 Filipinos detained last week for allegedly fishing illegally in Myanmar waters. …
Swiber bags US $ 77 million contract
by Mizzima News New Delhi (Mizzima) – Singapore’s Swiber Holdings Ltd. has bagged its first offshore pipeline installation contract in Burma. …
14 Filipino sailors held in Burma
Burma has been renamed Myanmar by the junta. The DFA offered, meanwhile, to repatriate 12 Filipino seafarers stranded in Greece the last five months after …
Burmese PM pats USDA on the back
Mizzima.com – Salai Han – ‎
Members of the USDA were also reportedly deployed by the junta to attack the motorcade of pro-democracy leader Aung San Suu Kyi, who was onapolitical tour …
(VOA Bur interview with U Win Tin) အမေရိကန်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအတွက် မျှော်လင့်ချက် ကောင်းလား
အမေရိကန်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအတွက် မျှော်လင့်ချက် ကောင်းလား
မြန်မာအရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ ဆက်ဆံမယ်ဆိုပြီးတော့ စစ်အစိုးရကို သမ္မတအိုဘားမား အစိုးရက ကမ်းလှမ်းတာဟာ မျှော်လင့်ချက်အမှားပေးတာ (Burma Engagement Offers False Hope) လို့ Australia နိုင်ငံ Sydney Morning Herald သတင်းစာမှာ အကြီးတန်းအယ်ဒီတာ ဂရေဟမ် ရယ်လေ (Graham Reilly) ဒီကနေဘဲ ဆောင်းပါးရေးသားထားပါတယ်။ သမ္မတအိုဘားမား အစိုးရဟာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ဗမာပြည်က ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်အောင် လုပ်ငန်းစဉ်အစလို့ ရှုမြင်နေတယ်လို့ Graham Reilly သုံးသပ်ပြီးတော့ မြန်မာစစ်အစိုးရကြတော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ နီးပါးလောက် သူတို့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်တာတောင်ဆက်ပြီး တရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ့် အောင်ပွဲအဖြစ် ရှုမြင်တယ်လို့ အယ်ဒီတာ Reilly က သုံးသပ်ထောက်ပြထားပါတယ်။ ဒီ သတင်းအယ်ဒီတာရဲ့  သုံးသပ်ချက်နဲ့ လက်ရှိ အမေရိကန်နဲ့ မြန်မာ ဆက်ဆံရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေများကို ပိုမိုသိရှိနိုင်ဖို့ နှစ်ရှည်နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသမားဟောင်းတဦးဖြစ်သူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် ကို ဦးရော်နီညိမ်း က ဆက်သွယ်မေးမြန်း သုံးသပ်ဆွေးနွေး တင်ပြထားပါတယ်။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ ဒီနေရာမှာ သမ္မတအိုဘားမား အစိုးရက သူတို့ရှုမြင်ပုံက ၂၀၀၈ ခုနှစ်အခြေခံ ဥပဒေကို ကျော်ကျော်ပြီးတော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ က အခွင့်အလမ်းတခုဘဲလို့ ပြောနေတာက ဆရာတို့အနေနဲ့လည်း မကြာသေခင်က လာရောက်သွားတဲ့ လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ကဒ် ကမ်ဘဲလ် (Kurt Campbell) နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တာဆိုတော့ သူတို့ကိုရော ဆရာတို့အနေနဲ့ မထောက်ပြခဲ့ဘူးလား။
ဦးဝင်းတင် ။ ။ ပြောပါတယ်။ ဘာဖြစ်လိုလည်းဆိုတော့ ဒါဟာ အမေရိကန်လို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုက ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဖြစ်နေတော့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများရဲ့  စိတ်ကူးစိတ်သန်း (သို့မဟုတ်)၊ ရည်မှန်းချက် (သို့မဟုတ်)၊ ကြံရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်ချက် ပုံစံအရတော့ ရွေးကောက်ပွဲကို တိုက်တွန်းမှာပေါ့။ ဒါအတွက် ကျနော်တို့ ဘာမှမပြောဘူး။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ ဗမာပြည်ရဲ့  အနေအထားအရဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲကို တိုက်တွန်းခြင်းဟာ ဒီ ခင်များပြောတဲ့ Sydney က လူ ရေးတဲ့အတိုင်းဘဲ မှားယွင်းသောမျှော်လင့်ချက်ကို ပေးတာ။ အဲဒါကြောင့် မစ္စတာ ကမ်ဘဲလ် တို့လာတဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ပြောတဲ့စကား။ ဘာလဲဆိုရင် မစ္စတာကမ်ဘလ် ခင်များတို့ဟာ ခင်များတို့ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်လုံးစလုံးမှာ အထက်လွှတ်တော် နဲ့ အောက်လွှတ်တော်မှာ hearing တွေလုပ်တဲ့အခါမှာ ခင်များတို့တွေရဲ့  စကားတွေထဲမှာ ဒီ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ တလုံးတပါသမှ မဟခဲ့ဘူး။ ဒါဟာ အလွန်ကို မှားယွင်းပါတယ်။ အလွန်ကို ကျနော်တို့ဘက်က အလွန်ကို စိတ်ပျက်တယ်လို ကျနော် စကားလုံးကို သုံးပါတယ် တစ်အချက် ။ နှစ်အချက် ကျနော်တိုက်တွန်းတာက ကောင်းပြီ ခင်များတို့အနေနဲ့ ဒီအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ပြောလိုမဖြစ်ဘူး diplomacy အရဘဲပြောပြော၊ တခြားအကြောင်းတွေအရဘဲပြောပြော စစ်အစိုးရကို မတိုက်တွန်းနိုင်ဘူး ဆိုလိုရှိရင်တောင်မှ အနည်းဆုံး အားလုံးတောင်းဆိုနေတဲ့ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိစ္စကို စစ်အစိုးရအနေနဲ့ ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ် ဆိုတာလောက်တော့ ပြောဖို့ကောင်းတယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာ။ သူတို့ကို ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကြတော့ အမေရိကန်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့က ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဘာမှမပြောဘူး။ Kurt Campbell အရင်လာသွားတဲ့ ဆီနိတ်တာ Jim Webb ကြတော့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေဟာ အပြစ်အနာဆာတွေရှိနေတယ် ဆိုတာကိုတော့ သူသိရှိနားလည်းပါတယ်လို့ ပြောသွားတယ်။ အဲဒီအခါကြတော့ အပြစ်အနာအဆာရှိပေမဲ့လည်း ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို သွားလိုက်ပါဆိုတဲ့ သူတို့ရဲ့ အမြင် ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကို ဆရာ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဦးဝင်းတင် ။ ။ ကျနော်တို့အထင်ကတော့ မစ္စတာဂျင်ဝဘ် အနေနဲ့ sanction တို့ ဘာတို့ ရုတ်သိမ်းရေးကိစ္စဘဲ ဦးတည်တယ်။ ဒါကို သွားချင်တယ်၊ ဖြစ်စေချင်တယ်။ နောက်တခါ အမေရိကန်အစိုးရက မစ္စတာကမ်ဘလ် တို့ လာတဲ့အခါကြတော့လည်း ပြောင်းလဲရေးဆိုတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ့။ ဒီ ရွေးကောက်ပွဲတွေ လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် တစုံတရာသော ခရီးကိုရောက်လိမ့်မယ်၊ ပေါက်လိမ့်မယ်လို့ သူတို့က ထင်နေတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ တည်ပြီးတော့ သူတို့က ဒီအခြေခံဥပဒေမှာ အပြစ်အနာအဆာ ရှိတယ်လို့စကားမျိုး ပြောကောင်းပြောမယ်။ သို့မဟုတ် ဒီအခြေခံဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုံးဝ ရေငုံနှုတ်ပိတ် တုံနိဘော လုပ်နေရင်လုပ်နေမယ်။ သို့သော် နောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့ နှစ်ယောက်စလုံးက တိုက်တွန်းတာ ရွေးကောက်ပွဲဘဲ။ ကျနော်တို့ လိုချင်နေတာက ကျနော်တို့ တိုင်းသူပြည်သားများ တောင့်တနေတာက လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ ကြုံတွေ့နေရတာ၊ နောက်တခါ ဒီမိုကရေစီ ရိုက်ချိုးမှုတွေ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်၊ ရေးသားခွင့်၊ စည်းရုံးခွင့်၊ လှုပ်ရှားခွင့်မရှိ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမရှိ၊ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်မရှိသလို ဖြစ်နေပြီ။ ဆိုပါတော့ ကျနော်တို့ ဘုန်းကြီးတပါး ဆွမ်းကျွေးချင်တယ် အန်အယ်လ်ဒီ ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ ဆွမ်းကျွေးလို့ မရဘူး။ ကျနော် ဘုန်းကြီးကျောင်းကို သွားဖို့ မလွယ်ဘူး။ အဲဒီလို ဖြစ်နေတဲ့ အနေအထားမျိုးတွေကို ကျနော်တို့က ပြောင်းချင်တာ။ သံခင်းတမန်ခင်း ပြောင်းတာတို့၊ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး ပြောင်းတာလောက် ကျနော်တို့က မှန်းတာမဟုတ်ဘူး။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ အမေရိကန်တွေကို ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ သူတို့က ဘာမဆို အပေးနဲ့အယူနဲ့ အမြဲတမ်း ဖြေရှင်းလေ့ရှိတဲ့အခါမှာ စစ်အစိုးရကို ကမ်းလှမ်းတဲ့နေရာမှာ (၁) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံး လွှတ်ပေးဖို့ (၂) ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲက လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတဖို့ အဲဒီလိုမျိုး အဆင့်နှစ်ဆင့် လုပ်ထားပါတယ်။ အဲဒီ နှစ်ဆင့်နဲ့မှ ဒီ စစ်အစိုးရဘက်က လိုက်လျောလာတယ်ဆိုရင် သူတို့ဘက်ကလည်း အရေးယူပိတ်စို့ဒဏ်ခတ်တာတွေကို ရုတ်သိမ်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ သူရဲ့  အပေးအယူဟာ တကယ်တမ်းမှာ ဘယ်လောက်ထိ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်။ စစ်အစိုးရဘက်ကလည်း သူတို့ဘက်က ဘယ်လောက်လိုက်လျောနိုင်တယ်၊ မလိုက်လျောနိုင်တယ်ဆိုတာ မပြသေးဘဲ သူတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာ ပြနေတယ် သဘောမှာတွေ့ရတယ်။ အဲဒီအပေါ် ဆရာ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဦးဝင်းတင် ။ ။ ဒါကို စစ်အစိုးရကတော့ သူတို့အဖို့ ရိုးနေပြီ။ ကျနော်တို့ စောစောကပြောသလို ဒီ စစ်အစိုးရက လက်မခံနိုင်တော့ဘူး။ (၁) အုပ်ချုပ်ရေးကို လက်မခံနိုင်တော့ဘူး။ ကျနော် လူတွေကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ကျနော် လေးစားပါတယ် ဥပမာ ဗိုလ်သန်းရွှေတို့ ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ဦးမောင်အေး ဘာညာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ ဒါတွေကို ကျနော်တို့ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး။ တိုင်းပြည်မှာ စစ်အာဏာယန္တရားကြီးက ဖိစီးကြိတ်ဝါးနေပါတယ်။ အဲဒီ စစ်အာဏာယန္တရားကြီး ကြိတ်ဝါးရေးကို ခင်များတို့ ပိတ်စဲဖို့ကို ကြိုးစားပါ။ ကျနော်တို့ လိုချင်တာ အဲဒါဘဲ။ ဆိုပါတော့ လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စ ပြောတဲ့အခါမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ကျော်ရှိနေတယ်။ ဦးတင်ဦးနဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ကျော် ရှိနေတယ်၊ ခွန်းထွန်းဦး နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ကျော် ရှိနေတယ်။ မင်းကိုနိုင်နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ကျော် ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကို အလေးထားပြောလည်း ကျနော်တို့ ပြောနေတာ ဒီ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလောက် ကျနော်တို့ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး။ တိုင်းပြည်ကြီးဟာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေက ဘယ်မှာကြည့်ကြည့် ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် ကျောင်းသားလူငယ်တွေကြည့်မလား၊ ခလေးတွေကြည့်မလား၊ ဈေးရောင်းသူတွေ ကြည့်မလား၊ လယ်သမားကြည့်မလား၊ အလုပ်သမားကြည့်မလား၊ နယ်စပ်ကတိုင်းရင်းသားတွေ ကြည့်မလား ဒီလူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေက အတော်ကို ပြင်းထန်နေပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒါတွေကိုလည်း ကြည့်ပါ။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ နောက်တခုက ဒီ အမေရိကန်အစိုးရဘက်က ပြန်ကြည့်ရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ပေါ်ပေါက်လာဖို့က ဦးစားပေး မဟုတ်ဘဲနဲ့ တရုတ်ရဲ့  သြဇာ အရှေ့ တောင်အာရှ လွှမ်းမိုးမှုမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ပါမသွားရအောင် သူတို့အနေနဲ့ ဘယ်လိုဘဲပြောပြော စစ်ရေးကာလတုန်းကလိုဘဲ ဘယ်လောက်ဆိုးတဲ့အစိုးရနဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် ချိတ်ထားတယ်။ ဒီသဘောမျိုးရော ရှိနေတယ်လို့ ကျနော်တို့ မြင်ကြည့်လို့ ရပါသလား။
ဦးဝင်းတင် ။ ။ ရတယ်ဗျ။ ဒါက ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဒီ တရုတ်ကိစ္စက ကျနော်တို့ ဗမာပြည်က တရုတ်နဲ့ကပ်နေတယ်။ မရဘူးဗျ သက်ရောက်မှု ရှိမှာဘဲ။ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် သဘာဝဘဲ။ ကျနော်တို့ ဗမာပြည်ကို Hawaii ကို သွားပို့လို့လည်း မရတော့ဘူး။ ဒေါ်စု ပြောတဲ့စကားရှိပါတယ် အိမ်နီးနားချင်းဆိုတာ ကျနော်တို့ ရွေးလို့ရတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ သို့သော် ကျနော်တို့ဟာ ဘယ်တုန်းကမှ တရုတ်တပည်လည်း မဖြစ်ဘူး။ တရုတ်ကျွန်းလည်း မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ တရုတ်ရဲ့  သြဇာခံလည်း မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ သူဘာသာ သြဇာရှိရင် ရှိမှာဘဲ၊ အရှိန်အ၀ါလည်း ရှိရင်ရှိမယ်။ အရေးကြီးတာက တရုတ်အောက်ကို ကျနော်တို့ ဘယ်လောက်ရောက်လဲ၊ ကျနော်တို့ တရုတ်နဲ့ ဘယ်လောက်ပေါင်းပြီး ဒီမိုကရေစီရေးတွေ သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ့အရေးတွေမှာ သို့မဟုတ် ဒေသအရေးတွေမှာ ကျနော်တို့ တရုတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ ဘယ်လောက်ထိ ဖျက်ဆီးသလဲပေါ်မှာဘဲ ကြည့်ရမယ်။ ဗမာပြည် တရုတ်ဘက် မရောက်ဖို့ဆိုပြီး စစ်အစိုးရနဲ့ အပေးအယူတွေ မလုပ်ပါနဲ့။ အဲဒီလို အပေးအယူ လုပ်ခြင်းဟာ မှားလိမ့်မယ်။ တရုတ်အောက် ရောက်ခြင်းမရောက်ခြင်းဆိုတာ ဗမာဘက် တဘက်တည်း ကြည့်ရုံနဲ့ မပြီးပါဘူး။ တရုတ်ဘက်ကိုလည်း ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ ညှိနှိုင်းရင် ရပါတယ်။ နိုင်ငံကြီးချင်း ဆက်ဆံရေးကိစ္စနဲ့လုပ်လို့ ရပါတယ် ပြောချင်ပါတယ်။
ဦးဝင်းတင် ။ ။ မရှိပါဘူး။ ကျနော်ထင်တယ် သူတို့လည်း ဘာဘဲပြောပြော ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေ ဦးဆောင်တဲ့ ဒီ စစ်အာဏာရှင်ယန္တယားကို မောင်းတင်နေတဲ့ လူများဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ တရုတ်သြဇာခံ မလုပ်ခဲ့ဘူးဗျ။ ကုလားသြဇာခံလည်း မလုပ်ဘူး။ ကျနော်ပြောချင်တာက တရုတ်တပည်တော့ မခံပါဘူး စိတ်ချပါ။ အမေရိကန် နားမလည်းလို့။ အလားတူဘဲ ဗမာက အမေရိကန် တပည်လည်း မခံဘူး။ ဒါ ရှင်းပါတယ်။ စဉ်းစားဖို့က ခင်များတို့ဘာသာ တရုတ်ကိစ္စကို သေချာစဉ်းစားပါ။ အဲဒါအတွက်တော့ မလုပ်နဲ့။ ဗမာပြည်မှာ ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ စစ်အစိုးရ ဖယ်ရှားရေးကို လုပ်ပါ။ ဗမာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ရင် ဗမာပြည်ဟာ ရပ်တည်နိုင်ပါတယ်။ တရုတ်တပည် ဘယ်တုန်းမှလည်းမဖြစ်ဘူး အဲဒီလိုဘဲ သဘောထားပါတယ်။ တပ်မတော်ကို ပြောတဲ့အခါမှာ ဒီ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ တရုတ်တပည် မဖြစ်ပါဘူး။ စိတ်ချပါ မဖြစ်ပါဘူး။ မဖြစ်ချင်လို့လည်း ရှင်းရှင်းပြောရရင် အမေရိကန်က လက်ကမ်းတာနဲ့ တပြိုင်တည်း လက်လှမ်းဆွဲတာပေါ့ဗျာ။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ ဒီကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဆက်နွယ်နေတာက နောက်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့  နိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေကို တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံတဲ့ ကိစ္စကိုလည်း ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး လိုက်လျောကောင်း လိုက်လျောမယ်လို့ မျှော်လင့်နေသူလည်း ရှိနေပါတယ်။ တဖက်မှာလည်း ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးဟာ အခုဆိုရင် သူတို့ အတွင်းစည်းရဲ့  အစည်းအဝေးက ဒီနေ့ဆို စပါပြီ။ သူတို့ရဲ့  လေးလပတ်ဆိုတာ စစ်တိုင်းမှုးတွေ၊ တပ်မမှုးတွေ နောက်ပြီးတော့ စစ်ရုံးက စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ အကုန်လုံးပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မေတ္တာရပ်ခံထားတာကို သူကိုယ်တိုင် ချပြရင်ချပြလိမ့်မယ်။ သူကိုင်တိုင် ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာကို။ ဆိုတော့ ဆရာအနေနဲ့ ဘယ်လိုယူဆပါလဲ။
ဦးဝင်းတင် ။ ။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်ကို ဝေဖန်တဲ့ လူတယောက်က ပြောဘူးတယ်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဟာ ဒီနေ့ ဗမာရဲ့  နိုင်ငံရေးအတွက် ထွက်ပေါက်ဘဲ။ ဒီ ထွက်ပေါက်ကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို လုပ်တဲ့နေရာမှာ ကျနော်တို့ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းမှာလည်း သုံးထားတဲ့စကားလုံး ရှိပါတယ်။ အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များဘဲ တွေ့ရမယ်။ ဒီဘက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဟိုဘက်က ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေ ဒါဘဲ။ အဲဒီတော့ ဒီအနေအထားမှာ ရှိနေပေမယ့် ကျနော် ခဏခဏပြောတယ် စိတ်စေတနာပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ စေတနာ မရှိဘူးဆိုရင်တော့ အများကြီး ခက်ခဲလိမ့်မယ်။ အဲဒီဟာ စေတနာမရှိခြင်းကလည်း စေတနာ မထားခြင်းကလည်း စေတနာကို ဖော်ထုတ်ခြင်းမပြုခြင်းကလည်း ဒါ အခက်အခဲတခုဖြစ်တယ်။ ကျနော်က ဒီ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲက ဖြစ်ဖို့လမ်းသိပ်မရှိလှဘူးလို့ တွက်တယ်။ သူတို့ဘက်က constitution အမျိုးသားညီလာခံကို ခေါ်တယ်၊ ပြီးတော့ စိတ်ကြိုက် constitution ဆွဲတယ်၊ အခု ရွေးကောက်ပွဲကို သွားဖို့ လုပ်နေတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ သူတို့က ထပ်ပြီးတော့ အဟန့်အတားတခု ထပ်ဖြစ်နေတာ ဘာလဲဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေက လွန်ခဲ့တဲ့ (၂) နှစ်လောက်က ပြောခဲ့တဲ့စကား ရှိတယ်။ ဒေါ်စုအနေနဲ့ (၁) ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေးကို အကုန်လုံး စွန့်လွှတ်ရမယ်၊ (၂) အလုံးစုံ ပျက်သုန်းရေးဆိုတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှု အယူအဆကို စွန့်လွှတ်ရမယ်။ နောက်တခုက sanction တွေကိစ္စပေါ့။ တချို့ ကတော့ လေးချက်လို့ ပြောတယ် သာမန်အားဖြင့်တော့ သုံးချက်ပါ။ ဒေါ်စုက ဘာလုပ်လည်း သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ ပြည်သူရဲ့  အကျိုးစီးပွားကို မျှော်လင့်ပြီးတော့ ကျမတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုပြီး ကမ်းလှမ်းတာ။ သူတို့ ဒီနေ့အထိ ဘာစကားပြန်လဲ။ ဘာစကားမှ မတင်ပြဘူး။ ဒီနေ့ အစည်းအဝေးမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးက ချပြရင်တော့ မသိဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက ငါလွန်ခဲ့တဲ့ (၂) နှစ်က ပြောခဲ့တဲ့ စကားအတိုင်းဘဲ၊ ငါတို့ တောင်းဆိုထားတဲ့ အချက် (၃) ချက် (၄) ချက်ကို သဘောတူရင် ငါ စကားပြောမယ်လို့ ပြောတဲ့အတိုင်းဘဲ ဒီအတိုင်းဘဲထားတယ်၊ ဒီ သဘောထား မပြင်ဘူးဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ဘဲ ပြောမှာဘဲ။ ကျနော်က အဲဒီအတိုင်းဘဲ ယူဆတယ်။ အဲဒါကို ကျနော်ကို ပြောတဲ့လူတွေက ခင်များတို့ မထင်ရင် ဘာဖြစ်လို့ ဒါကို တောင်းဆိုနေသလဲ။ ဒီ တောင်းဆိုခြင်းနဲ့ ထင်မြင်ခြင်းက တခြားဘဲ။ မှန်တဲ့ဟာကို တောင်းရမယ်၊ မှန်တဲ့သဘောထားကို လုပ်မယ်။ ခင်များ မနက်ဖြန် နိဗ္ဗာန်ရောက်မလားလို့ ထင်သလားလို့ မေးရင် မထင်ဘူးပေါ့၊ သို့သော် နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ မရည်မှန်းဘူးလား၊ ဆုမတောင်းဘူးလား ဒါ လုပ်မှာဘဲ။ နိဗ္ဗာန်ကို ဆုတောင်းမယ်၊ နိဗ္ဗာန်ကို မနက်ဖြန်ရောက်မယ်၊ သဘက်ခါ ရောက်မယ်၊ ဒီဘ၀ရောက်မယ်၊ နောက်ဘ၀ ရောက်မယ်ဆိုတာ မထင်ဘူးဆိုသလိုပါဘဲ။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ စစ်အစိုးရမှာက သဘာဝဓါတ်ငွေ့ရောင်းတဲ့ ၀င်ငွေက အရင်နဲ့မတူ အများကြီး ရနေတဲ့အခါကြောင့် sanction ကို ရ ဂရုမစိုက်ဘဲနေမယ်ဆိုလည်း လောလောဆယ်မှာ ရေရှည်တော့မရဘူးပေါ့ နေနိင်တဲ့အနေအထားမှာ ရှိနေတယ်။ အဲဒီအတွက် အခုနလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး မေတ္တာရပ်ခံတာကိုလည်း လက်မခံဘူး ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကိုလည်း တပြားမှ မလျှော့ဘူးဆိုတာ ကြုံတဲ့မိန့်ခွန်းတိုင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေ ပြောတယ် အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ ဒီအမေရိကန်ဘက်က တိုက်ရိုက်ဘဲ ထိတွေ့ဆက်ဆံမယ်ဆိုတဲ့ လမ်းစဉ်ကို ပြလိုက်လိုသာ အခု အနည်းငယ် ပြေလျှော့လာတယ် ဆိုတဲ့ အနေအထားအပေါ် ရောက်လာပေမဲ့ တကယ်တမ်းက ဘာမှမပြေလည်ဘူး။ အဲဒီတော့ ပြေလည်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုရှိမလဲလို့ မြင်ပါသလဲ။
ဦးဝင်းတင် ။ ။ ကျနော်မြင်တဲ့ဟာ ပြောရမယ်ဆိုရင် အခုနောက်ဆုံးပိတ် Mrs. Clinton ပြောလိုက်တဲ့ဟာ Mr. Campbell နဲ့ တွေ့တုန်းကလည်း ကျနော်တို့ ပြောလိုက်တဲ့စကား၊ အန်အယ်လ်ဒီက ပြောလိုက်တဲ့စကား အကောင်းဆုံးက ဘာလည်းဆိုတော့ ဒီ ရွေးကောက်ပွဲကို အသိအမှတ် မပြုဘူးဆိုတဲ့ဟာကို ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ နိုင်ငံတွေက ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ပါ။ EU ဟာမျိုးက ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ပါ။ အမေရိကန်တို့လို နိုင်ငံမျိုးက ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ပါ။ အခြားသော India လို နိုင်ငံမျိုးက ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ပါ။ ကျနော် ကုန်ကုန်ပြောရရင် တရုတ်လည်း အဲဒီလို ရပ်တည်ပါလို့ ပြောချင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ပြောချင်လည်းဆိုတော့ တရုတ်လည်း all inclusive ကို လက်ခံထားတာကို ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီကနေ တဆင့်ကျော်သွားရင် ဟိုဘက်ကို ရောက်သွားတဲ့ လွှတ်တော်တို့ အစိုးရအဖွဲ့တို့ ပေါ်လာရင်လည်း အဲဒါတွေကို အသိအမှတ် မပြုဘူးဆိုတာနဲ့ ခိုင်ခိုင်မာမာ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောပါ။ ဒီနည်းနဲ့သာ ဒီစစ်အစိုးရရဲ့  အခုသူတို့ ရပ်တည်နေမယ့် အားကိုကြည့်ပြီးတော့ သူတို့ ဇွတ်သွားနေတဲ့လမ်းကို ပိတ်လို့ရမယ်၊ ပြင်လို့ရမယ်၊ ပြောင်းလို့ရမယ်လည်း ပြောချင်ပါတယ်။
– သူရိယမှ ကူးယူပါသည်။
Tagged with ဦးဝင်းတင်
World focus on Burma (26-11-2009)
No Roadmap Without Dialogue: Opposition Leaders
Win Tin added that releasing pro-democracy leader Aung San Suu Kyi and having international observers monitoring the election are keys to making progress in …
BURMA: Civil Society Makes Its Mark in Aftermath of Cyclone Nargis
The efforts by civil society groups in Burma (also known as Myanmar) became significant in the wake of the bureaucratic hurdles the secretive and oppressive …
Australia to aid post-Nargis recovery plan in Myanmar
Xinhua – Lin Zhi – ‎
26 (Xinhua) — Australia will extend 15 million US dollars more of fund to Myanmar for carrying out various post-Nargis recovery plans in cyclone-hit areas, …
Aid trickles in despite desperate need of Nargis victims
Mizzima.com – Larry Jagan –
Burma has received less than 10 percent of what was allocated there. Each international appeal that has been made has fallen far short – even the original …
Philippines – RP Embassy in Yangon Visits, Extends Assistance to 14 Filipinos …
The fishermen narrated that all their personal belongings, including passports and personal documents, were confiscated by the Myanmar…
UN: Myanmar Cyclone Survivors Still Need Shelter
Hundreds of thousands of people are still living in makeshift homes 18 months after Cyclone Nargis tore into Myanmar’s Irrawaddy delta. …